စုပေါင်းအလူလေးအားဖိတ်ခေါ်ခြင်း | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » My Dear Diary » စုပေါင်းအလူလေးအားဖိတ်ခေါ်ခြင်း
- Kyaw Lay
Posted by Kyaw Lay on Oct 5, 2014 in My Dear Diary |7comments
အလှူရှင်တွေ စုပေါင်းပြီး လာမယ့် တနင်္ဂနွေနေ့ (5.10.2014) တွင်
မန္တလေးမြို့ ၊ မြစ်ဆိပ် ကမ်းနားလမ်း ၊ ပေါ်တော်မူ ဘုရား အနီး ဧရာမေတ္တာတိုက်ခန်းတွေ နား က ကျူးတဲတွေ မှာ နေထိုင်ကြတဲ့ ကလေး လူကြီး ၂၀၀ ကျော် ကို ၀က်သား အချိန် ၂၀ ပိသာာ အရွက်ကြော် နဲ့ နေ့လည်စာ ကျွေးမွေးမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ..
ထမင်းကိုတော့ ဘုန်းကြီးကျောင်း က ပိုနေတဲ့ ဆွမ်းတွေ ကို ဧရာမေတ္တာပရဟိတ အသင်းမှ အသင်းသားများက နေ့စဉ် ယူလာပြီး ခွဲဝေပေးပါတယ် ။
ကလေးတွေ က နေ့တိုင်း ၁၁ နာရီလောက်ဆို ထမင်းဖြူ ခွဲတမ်းရဖို့ လာပြီးတန်းစီစောင့်ကြပါတယ် ။
အိမ်ရယ်လို့ လုံလုံခြုံခြုံမရှိ ၊ စားစရာ အာဟာရပြည့်ပြည့်၀၀ သန့်သန့်ရှင်းရှင်း မရှိ ၊ ကိုယ့်သားလေး သမီးလေးရယ် လို့ ဂရုတစိုက် ယုယမယ့် မိဘတွေကလည်း ၀မ်းရေး တနပ်အတွက် မိုးလင်း မိုးချုပ် အလုပ်ကြမ်းလုပ်နဲ့ သူတို့ဘ၀လေးတွေက အရွယ်နဲ့မမျှ အပေအတေ ဆန်လှပါတယ် ။
ကျွန်တော်တို့ ကျွေးတဲ့ ထမင်းဟင်း တစ်နပ်ဟာ မကြီးကျယ်ပေမယ့် ၊ သူတို့ တစ်ဘ၀လုံးစာ မပြောင်းလဲနိုင်ပေမယ့် တစ်နပ်လေးဖြစ်ဖြစ် ပူပူနွေးနွေး အာဟာရရှိရှိ စားရပါစေ ၊ တစ်ခဏလေးဖြစ်ဖြစ် ပျော်ရွှင်မှုဆိုတာလေး သူတို့ရရှိပါစေလို့ ရည်ရွယ်ပါတယ် …
ကျော်လေး >>> 095178877
About Kyaw Lay
Kyaw Lay has written 16 post in this Website..
View all posts by Kyaw Lay →
နှိုးဆော်တာကိုက…ကုသိုလ် မနည်းရတယ်ဗျို့… .
ဒါနဲ့ အဲဒီကျူးတွေက အစိုးရကနေရာချပေးလိုက် အဲဒီချပေးတဲ့နေရာက အလုပ်နဲ့ဝေးကွာလို့ဆိုပြီး ရောင်းစားကာ ပြန်ရောက်ကျူးနေကြပြန်တာလို့ ကြားမိခဲ့တာ ဟုတ်လားဗျ။
မန်းလေးကမ်းနားလမ်းက ကျူးတွေက သူတို့ အတွက် မြေနေရာတွေ ပေး ခဲ့ ပါတယ်။
ဒါပေမယ့် ကိုခ ပြောတဲ့ အတိုင်းပါဘဲ။
ကိုကျော်လေးတို့ အလှူ ကို လမ်း လေးစား ပါ တယ်။
ဒီနေ့ ကတော့ ၀င်ဖတ်တာ နောက်ကျ သွားလို့ မသိလိုက်
နောက်ဆိုရင်အတူ ပါဝင်ပါ မယ်
ဟုတ်ကဲ့ပါကိုကြီးပေါက်ရေ အခုလိုပါဝင်ဆောင်ရွက်မယ်လို့ကြားတာ အတိုင်းမသိဝမ်းသာမိပါတယ်ဗျာ
.ပိုတဲ့နေရာက လိုတဲ့နေရာပို့ပေးနေတဲ့ ဧရာမေတ္တာပရဟိတ အသင်း ကိုချီးကျူးလေးစားမိပါတယ်
အဲဒီလို ပိုတဲ့နေရာက လိုတဲ့နေရာကို မျှဝေပေးတဲ့ ကြားခံလူမှုရေးအဖွဲ့တွေဖွဲ့ပြီး လုပ်နေကြတာ ကြားဖူးတယ်။
တခြားနိုင်ငံတွေတော့ မသိပေမယ့် အိန္ဒိယမှာတော့ ရှိတယ်ပြောတယ်။
ပိုနေတာတွေ အလဟဿ မဖြစ်၊ မလေလွင့်၊ မဆုံးရှုံးလို့ အကျိုးနှစ်မျိုးရလို့ အင်မတန်ကောင်းပါတယ်။
ဒါ က ရွှေမိုးတိမ်ရဲ့ ဖဘက မ လာတာ။
ဒီ အလှူ ရဲ့ အကြောင်းပါ။
မြစ်ဆိပ်ဖက် အေရာထွန်း တိုက်ခန်းများအနီး ကျူးတဲအိမ်များမှာ နေထိုင်ကြတဲ့ ကလေးငယ်များ (အယောက် 200 ကျော်ခန့်) ကို နေ့လည်စာ အလှူကျွေးမွေးမှာ ဖြစ်ပါတယ် ။
ကလေးတွေ အတွက် ထမင်းကိုတော့ ဘုန်းကြီးကျောင်းမှ ပိုတဲ့ ဆွမ်းများကို ပရဟိတ အသင်းတစ်သင်းမှ ယူလာပြီး နေ့စဉ်ဝေပေးနေတယ်လို့ သိရပါတယ် ။
မိဘတွေက ကျပန်းလုပ် ၊ သဲထမ်း ၊ အမှိုက်ကောက်ကြတာများတာမို့ ပညာရေးဆိုတာဝေးလို့ ၀မ်းရေးကိုတောင် အလျင်မီအောင် ဖြေရှင်းနေကြရတဲ့ဘ၀လေးတွေပါ ။
အလှူငွေ ပိုခဲ့ရင် ကလေးတွေ အတွက် ပေါင်မုန့် ၊ အချိူရည်လေးတွေ လှူနိုင်တာမို့ ကုသိုလ်ပါဝင်ချင်သူ သူငယ်ချင်းများ နည်း၊များ မဆို ပါဝင်လှူဒါန်းနိုင်အောင် ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်။
ဒီပုံလေးတွေကို ကြည့်မိရင် တစ်ခုခုတော့ ခံစားရလိမ့်မယ်လို့ထင်ပါတယ် …
ကျွန်တော် က တော့ နေ့တိုင်း နေ့တိုင်း စားစရာမပူပင် ရအောင် ထမင်း၀၀လင်လင် ကျွေးတဲ့ အိမ် က အဖေ နဲ့ အမေ ကို ကျေးဇူးတင်မိတယ် ။
ကလေးတွေ ဟာ ရှိလှမှ အသက် သုံးလေးနှစ်က နေ ဆယ်နှစ် ပတ်ဝန်းကျင်လေးတွေ ။ မိဘတွေ က ဗလာကျင်းနေတဲ့ ထမင်းအိုး ဟင်းအိုးတွေ နဲ့ သူတို့ ကို ထားခဲ့ပြီး ဆိုက်ကားနင်း ၊ ကုန်တင်ကုန်ချ ၊ သဲထမ်း ၊ အမှိုက်ကောက် စတာတွေ လုပ်ဖို့ သွားလေရဲ့ ။ ဒါမှလည်း ပိုက်ဆံ ဆိုတာရမှာကိုးးး
ဒါဆို အိမ်မှာကျန်နေတဲ့ သူတို့လေးတွေကရော ???
ဧရာမေတ္တာဆိုတဲ့ လူမှုကူညီရေး ပရဟိတ အသင်းကနေ ဘုန်းကြီးကျောင်းမှာ ပိုနေတဲ့ ဆွမ်းတွေ ကို စုဆောင်းပြီး သူတို့တွေကို နေ့စဉ်ဝေပေးပါတယ်တဲ့ (ကျေးဇူးလည်းတင် ၊ သာဓုလည်းခေါ်မိပါတယ် )
ကလေးတွေ အနေနဲ့ ထမင်းအဖြူတော့ မငတ်တော့ဘူးပေ့ါလေ ။ အမေ ထမင်းချက်ဖို့ဆန်မရှိလို့ ထမင်းအိုး မတည်ခဲ့နိုင်ဘဲ အလုပ်သွားရင်လည်း သူတို့ အငတ်နေစရာမလိုဘူးပေါ့ ။
ဒါပေမယ့် ဟင်းကတော့ ဒီလူအုပ်ကို တာဝန်ယူဖို့ ဆိုတာ ဘယ်လွယ်ပါ့မလဲ …
ကျွန်တော့ သူငယ်ချင်း Deo Gratais Thinzar က ကလေးတစ်ယောက်ကို မေးကြည့်တယ် ။
နေ့တိုင်း ဟင်းနဲ့ စားရလားဆိုတော့ …
မစားရဘူးတဲ့ ။ ဒီနေ့ ၀က်သားဟင်းနဲ့ ထမင်းစားရတာ အရမ်းပျော်တာပဲတဲ့လေ …
ကလေးလေး က အသက်ငါးနှစ်လောက်ပေ့ါ ။ ဒါပေမယ့် သူ့ဘ၀မှာ လောကဓံဆိုတာကြီး ကို ထုသားပေသား ကျ ခံနေရတဲ့ဘ၀လေး ။
ကျွန်တော်တို့ အိမ်မှာ ဟင်းမကြိုက်လို့ ဂျီးများမိတာ ရှိမယ် ။ မိဘ ကို ကိုယ်ကြိုက်တဲ့ ဟင်း မချက်လို့ ညူစူမိတာ ရှိမယ် ။ ပိုလျှံနေလို့ သွန်ပစ် ၊ လွှင့်ပစ်လိုက်ရတာ ရှိမယ် ..
အဲ့လို အချိန်တွေ မှာ သူတို့ အတွက်ကတော့ ထမင်းဖြူ ကိုတောင် သူများလှူမှ နပ်မှန်အောင် စားရတဲ့ဘ၀ တွေပါ ။
မြန်မာပြည်မှာ ငတ်ပြီးသေတဲ့ မသာ ရှိတယ်လို့ ပြောကြတယ်
ဝေးဝေး သွားကြည့်စရာ မလိုပါဘူး … မြို့ပြကနေ နည်းနည်းကလေးပဲ ထွက်ကြည့်လိုက်ပါ …
မြို့ပြ လူတန်းစား နဲ့ မတူ …. လူပေမယ့် လူ လို မနေနိုင်တဲ့ ဘ၀တွေ ကို ကျွန်တော်တို့ တွေ့နိုင်မှာ ။
ကျွန်တော် ကလေးတွေကို ကြည့်မိတိုင်း သူတို့ တစ်ယောက်ချင်းစီအတွက် ပုံပြင် တစ်ပုဒ်ဆီရှိနေတာ ခံစားရတယ် …
နှလုံးသားနဲ့ ဖတ်မှ နားလည်နိုင်မယ့် ပုံပြင် …
ပျော်ရွှင်စရာမကောင်းတဲ့ ဇာတ်နာတဲ့ ပုံပြင် …
နှလုံးသားနဲ့ ဖတ်ရှု့မယ့် ကျွန်တော့ သူငယ်ချင်းတွေ အတွက် သူတို့ ဘ၀အကြောင်း ပုံပြင်လေးတွေ ကျွန်တော် ပြောပြချင်ပါသေးတယ် …
ကျွန်တော်တို့ အလှူငွေ ပိုသေးလို့ နောက်တစ်ပတ်လည်း သွားပြီး ကျွေးဦးမယ်လို့ စဉ်းစားထားတယ် ။ ကျောင်းနေတဲ့ ကလေးတွေလည်းရှိလို့ စာအုပ် ၊ ခဲတံလေးတွေ ၊ အက်ျီအဟောင်းလေးတွေလည်း အလှူခံပါတယ်နော် ။